यस कारण आईफोनको मुल्यमा भारी गिरावट आउनेछ ! « News24 : Premium News Channel
यस कारण आईफोनको मुल्यमा भारी गिरावट आउनेछ !
एजेन्सी, २१ भदौ । यसै महिना एप्पल कम्पनीको इभेन्ट रहेको छ । यसै मौकामा कम्पनीले आईफोनका केही नयाँ प्रोडक्टहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसरी आईफोनका तीन वटा नयाँ प्रोडक्टहरु सार्वजनिक हुँदा पहिल्यै सार्वजनिक गरिएका आईफोनहरुको मुल्यमा भारी गिरावट आउँने आँकलन गरिएको छ । यसैबीच फोन ट्रेड कम्पनीले खरिद गरेको पुराना आईफोनहरुको मुल्यमा गिरावट आउने कुरा चर्चा गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
द सनको एक रिपोर्टका अनुसार फोन ट्रेड कम्पनीले अहिले बाटै पुराना आईफोनहरु बेच्न सल्लाह दिइरहेको छ । पछिल्लो समय आईफोन सार्वजनिक बारे अध्ययान गर्ने एक फर्मका अनुसार आईफोन ८ को मुल्यमा ८ प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्नेछ, भने आईफोन ८ प्लसको मुल्यमा १० प्रतिशतसम्म गिरावट हुनेछ ।
एनवरफोनको अनलाइन हेड डेनिस टिमिसले भनेका छन्, ‘नयाँ आईफोन सार्वजनिक हुनेवित्तिकै पुराना आईफोनहरुको मुल्यमा भारी गिरावट आउने छ । त्यस्तै बजारमा पुराना हेडसेटले पनि मुल्य पाउँदैन । किनकि मान्छेले पुराना डिभाइस बेचिरहनेछन्, र नयाँ मोडलमा स्वीच गर्नेछन् । त्यसैले पुराना हेडसेटको मुल्यमा पनि भारी गिरावट आउनेछ ।’
मोबाइल रिसाईकलिङ कम्पनीले पनि यस कुरामा अध्ययन गरेको छ, जहाँ पछिल्लो जेनेरेशनमा आईफोनको मुल्यमा भारी गिरावट आएको छ । नयाँ मोडल आउने वित्तिकै पुराना आईफोनहरुको मुल्यमा कमी आईहाल्छ । रिपोर्टका अनु्सार नयाँ आइफोन सार्वजनिक भएको १० दिन भित्रै पुराना आइफोनहरुको मुल्यमा नेपाली ७२०० रुपैयासम्म कम हुनेछ ।